Andrographolide bụ ngwaahịa ihe ọkụkụ nke ewepụtara site na ahịhịa nke na-eme na China. Umu ahihia a nwere otutu ihe eji eme ihe na TCM maka ogwugwu oria iku ume iku ume na oria ndi ozo na oria. E webatara Andrographis paniculata ma zụlite ...
Resveratrol bụ polyphenolic antitoxin dị na ụdị osisi dị iche iche, gụnyere ahụekere, mkpụrụ osisi, na mkpụrụ vaịn, nke a na-ahụkarị na mgbọrọgwụ nke polygonum cuspidatum. Ejiwo Resveratrol na-agwọ mbufụt ke Asia ruo ọtụtụ narị afọ. N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, uru ahụike nke uhie ...
N’afọ 1931, ọ bụ oge izizi iji kewapụ ma wepụta ya na soybean. N’afọ 1962, ọ bụ oge izizi iji gosi na ọ dịka estrogen mammalian. Na 1986, ndị ọkà mmụta sayensị America hụrụ isoflavones na soybean nke na-egbochi mkpụrụ ndụ cancer. Na 1990, National Cancer Institute nke United States c ...
Na-adịbeghị anya ọnwa isii, na US Ngalaba Agriculture ka nọgidere tọhapụrụ mma quarterly Ndepụta Ngwaahịa akụkọ na kwa ọnwa ọkọnọ na ina akụkọ nke ugbo na ngwaahịa, na ahịa na-echegbu onwe banyere mmetụta nke La Nina onu na soybean mmepụta ke Argentina, nke mere .. .
Ihe ngosi ụbọchị: July 28-30, 2021 Ebe: Xi'an International Conference Center (Chanba) 2021 "China West Int'l Plant Wepụ ọgwụ ngwaọrụ nke ihe ngosi" ga-abụ ihe omume dị egwu dị elu na ndị na-azụ ahịa ụlọ na nke mba na ndị ọkachamara ụlọ ọrụ. Ihe ngosi w ...